Ukusetshenziswa polystyrene ekwakhiweni eziningi eziwusizo elihlobene ne izici ezithile zomkhathi lapho izidakamizwa. Kuyinto izinto ezahlukene ukuthi kuvame kakhulu ukuba kusetshenziswe i-ukufudumala ezihlobene nomsebenzi, ke okuhlala isikhathi eside, has ongaphakeme conductivity ezishisayo kanye ukumelana ezinhle endaweni eshisa kakhulu, ngaleyo ndlela kungabi isenzo lomlilo. Futhi ngenxa isisindo encane polystyrene, ngezandla zakhe wenza, kulula ukuyisebenzisa, ukuncipha sakugcina isakhiwo. Ukwakheka ukwaziswa okufanayo, ngokujwayelekile amanzi, yamathebhu futhi isibopho.
Ngenxa yokuthi polystyrene isakhiwo lezinyosi, kuba yinto enhle kakhulu ukushisa nangokuvikela ezisetshenziselwa ukwakhiwa yesimanje. Khiqiza okufanayo penopolistirolbeton izandla kakusilo njengoba kunzima njengoba kungase kubonakale efika kuqala. Uma amathiphu athobele isikhathi esithile esinikeziwe, futhi nakakhulu kuhlangana okungu, ikhwalithi impahla okuholela akusho sizithobe endaweni yokukhanda. Phela, yakhiwa amanzi kuphela, okuyinto uthole ngisakhathazwa, zithutha Foam futhi izinhlobo ezahlukene usimende. Imvama, kuba noma ukhonkolo noma kakhonkolo. Ukuze ukwandisa nekusebenta ngokwenza polystyrene ngezandla zakho, ungasebenzisa zonke izinhlobo izithasiselo.
Yini edingekayo ukuze womshini
Ukusetshenziswa okunjalo olunzulu ekwakheni yesimanje kwale nto wachaza iqiniso lokuthi intengo polystyrene kuyinto ephansi kakhulu kunalokho ezinye izinto zokwakha, kanye izinga Nokho, akukho okubi nakakhulu. Futhi ngokwenza styrofoam ekhaya, ungagcina nakakhulu ezizoba yayo. Ukuze silungiselele lokhu okubalulekile, udinga lamathuluzi, okuhlanganisa lokwela ezivamile kanye ngomshini ohlanganisa usemende.
Lapho polystyrene elenziwe ngezandla zabo, ingasetshenziswa ngaphezu izingxenye ngenhla futhi asebenza ngebhethri isihlabathi, enwetshiwe polystyrene e granules. Kuye onjani ukuminyana kufanele ekugcineni ube ukhonkolo, kufanele uqaphele ukuba ukhethe usayizi umthamo zonke izingxenye. Ngakho, womshini polystyrene grade D550 isihlabathi okuxubile usimende e isilinganiso eyodwa kwenye, bese ungeze ku ingxube foamed polystyrene, ngokuvamile ukubeka 0.5 cubic metres. Ngemva zonke izithako axutshwa, unama okuholela ibekwa mixer futhi uyifake phakathi amandla isilinganiso. Ngesikhathi kokuhlinzwa, amanzi sengezwe, itiyela, njalo ibangele yonke le ngxube.
Lapho polystyrene ilungele ukusetshenziswa
Ukuze silungiselele polystyrene ngezandla zabo, itiyela isetshenziswa ngoba odlulisela amanzi oxosha izakhiwo ingxube. Ngemva inqubo ibangele usuphothuliwe, ingxube okuholela is batheleka amafomu ukuthi kungenziwa kalula sisuselwa amabhodi, ongqongqozayo ndawonye, nokwelapha ingaphakathi lubricating amafutha. Ukubeka isikhathi ingxube ngokuvamile amahora mayelana 24-25, ngemva kwalokho block ngikhishwa isikhunta futhi bavunyelwe ukuba ome endaweni epholile. Ngemva kwamasonto amabili noma amathathu zingabantu isilungele ukusetshenziswa.
Element tits ngezandla zakhe: imidwebo, izithombe